Ka ganacsato xawaaraha ugu dhakhsaha badan, daahitaanka ugu yar iyo fulin degdeg ah
Shaqaalaha FXPRIMUS waa kuwo ku mashquulsan siinta ganacsatada waayo aragnimo ganacsi oo waxqabad fiicni leh taas oo aan lamid ah shirkadaha kale ee dhigeeda ah. Ogow wax badan oo ku saabsan tiknoolajiyadayda degdega hilaaca oo kale ah, taas oo ku siinaysa waqti kasta oo maalinla ah waayo aragnimo ganacsi oo ila xad waxqabad fiicni leh, meel kasta ood dunida kaga sugan tahay.
Daahitaan yar & Fulin Degdeg ah
Xarumahayga xogta ee ku kala baahsan daafaha caalamka ayaa siiya macaamishayada daahitaanka ugu yar iyo fulinta degdeg ah ee suurogalka ah. Dhamaan xarumaha xogta fiber optic ah ayaa ku xiran servers muhiimka ah ee FXPRIMUS ee yaala meel aan miles badan ka fogayn haayadaha dilaaliinta suuqa samaynta si loo hubiyo in si degdeg ah loo fuliyo dalabkaaga.
Fulin degdeg ah
Daahitaan aad u yar
Isku xidhaha fiber optic ugu dheeraya
Shabakadaha Xarumaha Xogta Caalamiga ah
Server kayaga ugu muhiimsani wuxuu yaala New York. Si kastaba ha noqotee, iyadoo qayb ah ka go'naanshiyahayaga ah inaan kuugu adeegno si fiican, waxaan leenahay servers yaala dhamaan caalamka oo idil si macaamishayada oo dhan ay u heli karaan fulin degdeg ah oo sugan adeegyadayada wakhti kasta iyo goob kasta.
MAREYKANKA: Xarunta Xogta New York (loogu talogalay Ameerikaanka)
LD: Xarunta Xogta ee London (Loogu talagalay Yurub iyo Afrika)
SG: Xarunta Xogta ee Singapore 1 (Loogu talagalay Aasiya Pacific)
SL: Xarunta Xogta ee Siyool1 (Loogu talagalay Aasiya Pacific)
HK: Xarunta Xogta ee Hong Kong (loogu talagalay Hong Kong iyo Aasiya)
CN: Xarunta Xogta Shiinaha (Loogu talagalay Shiinaha)
Si loo hubiyo ilaalinta iyo badbaadada ugu sarreysa, dhammaan macluumaadka ay hayaan nidaamyada xogtu iyo servers ku si buuxda ayaa loo badalaa koodhadh ama loo qariyaa (encrypted). Tani waxay damaanad qaadeysaa ilaalinta wixii macluumaad ah ee lasoo gudbiyay, iyada oo aanay suurta gal ahayn in la jabin karo. Waxaan sidoo kale leenahay nidaamyo difaac oo gudaha ah si loo xoojiyo xasilloonida serverka loona joojiyo hakariska.
Habka badalida xogta ee 128-bit keys (Encryption with 128-bit keys)
Kahortagga kuwa wax jabsadda
Samaynta nidaamyada difaaca ee Dos-attack
Ilaalin 24/7 ah
XARUMAHA XOGTA CAALAMKA OO KU XIRIIRSAN FXPRIMUS IYADOO LA ADEEGSANYO XADHKAHA FIBER OPTIC AH UNA SUUROGALINAYA HELIDA DEGDEGA AH ADEEGYADAYADA, WAKHTI KASTA.
Nidaamyada tiknoolajiyadayada aadka u adag waxa ku jira hawlaha xog qaadida iyo soo celinta si aan uga ilaalino halista ah lumida ah xogta.
kaabayaasha ganacsiga xasilloon
Nidaamyada maareynta khatarta tayada leh
Ka samaynta koobi xogaha
Is dhexgalinta Adeegyada Website ka
Si loo siiyo ganacsatadayada adeegyada ugu tayada sareeya, nidaamkayaga ayaa naga caawinaya is dhexgalinta adeegyada webka. Muuqalkan ayaa ogolaanaya in si toos ah loo daabaco jaantusyada iyo xigashooyinka qiimaha, shaxano isbedelaya iyo kuwo kale oo badan, si looga caawiyo macaamisheena go'aanada ganacsi.
Helitaanka waqtiga rasmiga ah ee qalabyada ganacsiga
Tayada ugu sarreysa iyo adeegyo kala duwan
Helida fudud ee jaantuusyada tooska ah iyo shaxanada
kaa haqabtiraya Suuqyada Maaliyadeed
Barnaamijyadanada ganacsiga ee kala duwan oo ay ku jiraan kan ugu caansan ee MT4, waa mid haqabtiraya dhamaan hawlaha ganacsiga iyo dilaalka ee gudaha forex, badeecadaha, iyo suuqyada indices, u oggolaanaya ganacsatayada inay qayb ka ahaadan suuqyada aad seexan, ee qiimahoodu dhan yahay maalintii $5.3 trillion.
Ka ganacso forex, commodities & indices
Ka mid noqo suuqa ugu weyn adduunka ee laga helo iibsadayaasha iyo iibiyayaasha ugu badan
Suuqa isku badalka sarifka lacagaha qalaad waa mid qiimahiisu dhan yahay maalinkii $5.3 trillion
Ka faa'iideyso aaladaha maaliyadeed ee tirada badan lehna khidmada spread ee ugu hooseysa